Ciidamo Soomaali iyo Itoobiyaan ah oo qarax qasaare geystay lagula eegtay duleedka Baydhaba – Balcad.com Teyteyleey
In ka badan toddoba askari oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ayaa ku dhintay Qaraxyo lagula eegtay duleedka magaalada Baydhab ee Gobolka Bay, waxaana Qaraxyadaan kala duwan ku dhaawacmay tiro kale oo askari ah.
Qaraxa koowaad ayaa wuxuu ciidammo Itoobiyaan ah ku qabsaday duleedka Baydhabo, halkaasoo ay ku dhinteen saddex askari, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen, inkastoo aan la ogeyn tiradooda dhabta ah.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijiyay in gaariga ay wateen ciidamada Itoobiya ee lala eegtay Qaraxa uu ka yimid degmada Waajid ee gobolka Bakool, isla markaana uu ku socday degmada Baydhabo ee Gobolka Bay.
Taliska ciidamada AMISOM ee gobolka Bay ayaan weli ka hadlin khasaaraha soo gaaray ciidamadooda ka socda Itoobiya ee maanta Qaraxa lagula eegtay duleedka Baydhabo, iyadoo tani aysan ahayn markii ugu horreysay oo Qarax lagu dilo ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM.
Dhanka kale, afar askri oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur-galbeed ee Somalia – ayaa iyagana ku dhintay Qarax lagula eegtay deegaanka Goof-guduud oo ku dhaw magaalada Baydhabo.
Ciidamadan Soomaalida ah ayaa la sheegay in lagu qarxiyay mooto bajaaj ay wateen, sida ay sheegaan dadka deegaanka, halkaasna ay ku dhinteen gabi ahaan ciidamadii watay mootadaas.
Falalkan ayaa waxay qayb ka noqonayaan dhibaatooyinka ka dhaca Gobolka Bay, waxaana weeraradan khasaaraha geystay sheegatay Al-shabaab oo dagaallo kula jirta Dowladda Soomaaliya iyo Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Ugu dambeyn, Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo dhawaan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya lagu dilay qaraxyo lagula beegsaday inta u dhexeysa Baydhabo iyo Waajid.
The post Ciidamo Soomaali iyo Itoobiyaan ah oo qarax qasaare geystay lagula eegtay duleedka Baydhaba appeared first on Ilwareed Online.